Ndị Kọlọsi 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Kọlọsi 3:1-25
Àgwà ọjọọ mmadụ na-akpabu na àgwà ọma (1-17)
Meenụ ka ahụ́ unu nwụọ (5)
Ịhụnanya na-eme ka mmadụ niile dịrị n’otu (14)
Ọdụ Pọl dụrụ ndị niile nọ n’ezinụlọ Ndị Kraịst (18-25)
3 Ma, ọ bụrụ na Chineke kpọlitere unu na Kraịst n’ọnwụ,+ na-achọnụ ihe ndị dị n’eluigwe, ebe Kraịst nọ ọdụ n’aka nri Chineke.+ 2 Na-echenụ gbasara ihe ndị dị n’eluigwe,+ ọ bụghị ihe ndị dị n’ụwa.+ 3 Unu anwụọla, ma, ndụ unu dị Kraịst n’aka n’ihi na ọ bụ ihe Chineke chọrọ. 4 Mgbe Kraịst, bụ́ ndụ anyị,+ mere ka a hụ ebube ya,* a ga-emekwa ka a hụ ebube unu na ya.+ 5 N’ihi ya, meenụ ka ahụ́ unu nwụọ+ n’ihe gbasara ịkwa iko,* adịghị ọcha, ejideghị onwe unu ma agụụ mmekọahụ gụwa unu,+ ihe ọjọọ ịgụ unu agụụ, na anyaukwu, nke bụ́ ikpere arụsị. 6 Chineke ga-ewesa ndị na-eme ihe ndị a iwe. 7 Unu na-emebu ihe ndị a mgbe unu na-agbanwebeghị.+ 8 Ma, ugbu a, unu kwesịrị ịkwụsị ihe ndị a: ọnụma, iwe, ihe ọjọọ,+ ịkparị mmadụ,+ na ikwu okwu rụrụ arụ.+ 9 Unu agharala ibe unu ụgha.+ Yipụnụ àgwà ochie unu na-akpabu,*+ 10 ma yirinụ àgwà* ọhụrụ,+ nke Chineke na-eme ka anyị na-akpa ma anyị mata ya nke ọma. Ọ bụ ya ga-eme ka àgwà anyị na-agbanwe, na-adị ka nke Chineke.+ 11 Ihe a gbasara ma onye Grik ma onye Juu, ma onye e biri úgwù ma onye a na-ebighị úgwù, ma onye mba ọzọ ma onye Sitia,* ma ohu ma onye nweere onwe ya. Ma, Kraịst bụ ihe niile, anyị na ya dịkwa n’otu.+ 12 Ebe ọ bụ na Chineke họọrọ unu,+ unu abụrụkwa ndị dị nsọ na ndị ọ hụrụ n’anya, yirinụ àgwà ndị a ka uwe: obi ebere,+ obiọma, obi umeala,+ ịdị nwayọọ,+ na ndidi.+ 13 Na-edirinụ ibe unu ihe, na-agbagharakwanụ ibe unu kpamkpam+ ma e nwee onye ibe ya mejọrọ.+ Jehova* gbaghaara unu kpamkpam, unu kwesịkwara ịna-emere ibe unu otú ahụ.+ 14 E wezụga ihe ndị a niile, yirinụ ịhụnanya ka uwe,+ n’ihi na ịhụnanya na-eme ka mmadụ niile dịrị n’otu.+ 15 Kwenụ ka udo nke Kraịst na-achị obi unu,+ n’ihi na Chineke kpọrọ unu ka unu bụrụ otu ahụ́, nọrọkwa n’udo. Na-ekelekwanụ Chineke mgbe niile. 16 Kwenụ ka ihe Kraịst na-akụzi ju eju n’obi unu. Ọ ga-eme ka unu mara ihe. Jirinụ abụ ọma+ na abụ e ji eto Chineke, na nke e ji ekele ya, na-akụziri ibe unu ihe. Jirikwanụ ha na-agba ibe unu ume.* Jirinụ obi unu niile na-abụrụ Jehova* abụ.+ 17 Ihe ọ bụla unu na-eme, ma n’okwu ọnụ ma n’omume, na-emenụ ya n’aha Onyenwe anyị Jizọs. Sikwanụ n’aha ya na-ekele Chineke bụ́ Nna.+ 18 Ndị nwunye, na-edonụ onwe unu n’okpuru di unu.+ Ọ bụ ihe Onyenwe anyị chọrọ. 19 Ndị bụ́ di, hụnụ nwunye unu n’anya mgbe niile.+ Unu ewesala ha iwe.*+ 20 Ụmụ, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi n’ihe niile,+ n’ihi na ọ na-amasị Onyenwe anyị. 21 Ndị nna, unu akpasula ụmụ unu iwe,+ ka ha ghara ịda mbà n’obi. 22 Ndị ohu, na-eruberenụ ndị nna unu ukwu* isi+ n’ihe niile. Unu erubela isi naanị ka ndị ọzọ hụ unu, ka obi dị ndị mmadụ ụtọ, kama jirinụ obi unu niile na-erubere ha isi iji gosi na unu na-akwanyere Jehova* ùgwù. 23 Jirinụ obi* unu niile na ike unu niile na-eme ihe ọ bụla unu na-eme, dị ka ùnu na-emere ya Jehova,*+ ọ bụghị mmadụ. 24 N’ihi na unu ma na ọ bụ Jehova* ga-akwụ unu ụgwọ ọrụ o kwere unu ná nkwa.+ Bụrụnụ ndị ohu Kraịst, bụ́ Nna unu ukwu. 25 N’eziokwu, a ga-akwụ onye na-eme ihe ọjọọ ụgwọ ihe ọjọọ ọ na-eme,+ n’ihi na Chineke anaghị ele mmadụ anya n’ihu.+
^ Na Grik, “Mgbe a ga-eme ka Kraịst, bụ́ ndụ anyị, pụta ìhè.”
^ Na Grik, “mmadụ ochie na omume ya.”
^ “Onye Sitia” pụtara onye ime ọhịa.
^ Ma ọ bụ “na-adụ ibe unu ọdụ.”
^ Ma ọ bụ “Unu emesila ha ike.”
^ Ndị nna ukwu a na-ekwu okwu ha ebe a bụ ndị mmadụ.
Ndị Kọlọsi 3